साउदी दु’र्घटनामा मरेका भनेर काजकिरिया र मृ’त्यु दर्ता समेत गरिएका सुभास ज्युदै घर आए !! मृ’त्यु दर्ता खारेज गर्न चार बर्स लाग्यो - Public 24Khabar
Home News साउदी दु’र्घटनामा मरेका भनेर काजकिरिया र मृ’त्यु दर्ता समेत गरिएका सुभास ज्युदै...
साउदी दु’र्घटनामा मरेका भनेर काजकिरिया र मृ’त्यु दर्ता समेत गरिएका सुभास ज्युदै घर आए !! मृ’त्यु दर्ता खारेज गर्न चार बर्स लाग्यो
मोरङको बेलबारी नगरपालिका-११ लक्ष्मीमार्गका ४० वर्षीय सुभाष तामाङ जीवितै छन् । तर सरकारी रेकर्डअनुसार २०७२ सालमै उनको मृ’त्यु भइसकेको देखिन्छ ।
सम्बन्धित निकायमा मृ’त्यु दर्ता गर्दै परिवारबाट उनको काजकिरियालगायत मृ’त्युपछिको संस्कार पनि भइसकेको छ । मृ’त्यु दर्ता खारेजी नहुँदा आफू जीवितै रहेको प्रमाण जुटाउन उनले ठूलै संघर्ष गर्नु पर्‍यो ।
जिउँदै रहँदा पनि लामो समयदेखि सरकारी अभिलेखमा उनी मृ’तकको सूचिमा थिए ।
त्यसकारण धेरै दुःख पाएका उनले बिहीबारबाट भने निक्कै राहत महशुस गरेका छन् ।बल्लबल्ल जीवितै रहेको प्रमाण जुटाउन सके । मृतकको सूचिबाट नाम हटाउँदै उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नागरिकताको प्रतिलिपी उपलब्ध गराएको छ । आफ्नै मृ’त्यु दर्ता खारेजी र नागरिकताको प्रतिलिपीका लागि उनले कैयौं पटक सरकारी निकायमा धाउनु पर्‍यो ।
मृतक अभिलेखदेखि नाम नहट्दा उनले सरकारी निकायबाट कुनै काम लिन सकेनन् । भोजपुरको (साविक कुदाककाउले गाविस-९) हालको षडानन्द नगरपालिका –२ पुरानो ठेगाना भएका उनको मृत्युसँग एउटा अनौठो प्रस‍ंग जोडिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमा रहेका सुभाषको २०७२ साल असार २५ गते ट्याक्सी दुर्घटनामा मृ’त्यु भएको खबर परिवारले पाए ।
सुभाषसहित चारजना सवार रहेको ट्याक्सी दुर्घटनामा दुईजनाको घटनास्थलमै मृ’त्यु भयो ।
गम्भीर अवस्थाका दुईजनालाई उपचारका लागि लगिएकोमा एकजनाको अस्पतालमा भोलिपल्ट मृ’त्यु भयो । बागलुङको ढोरपाटन-६ का तेजेन्द्र भण्डारीको गम्भीर अवस्थामा कोमामा उपचार भइरहेको भनियो ।
मृतकमध्ये एकजना सुभाष रहेको जानकारी परिवारलाई प्राप्त भयो । काम गर्ने कम्पनीले पनि किटान गरिदिएर राहदानीमा सुभाषको मृ’त्यु भएको छाप लगाइदियो । अस्पतालले मृ’त्यु प्रमाणपत्र बनाइदिएपछि दुर्घटना भएको २८ दिनमा श’व नेपाल ल्याइयो ।
सुभाषकी पत्नी सन्तोषी पतिको मृ’त्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बोकेर श’व बुझ्न काठमाडौं पुगेकी थिइन् । बेलबारीमा श’व ल्याएर परिवारले आफ्नो संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि र काजकिरिया गरे । सन्तोषीका अनुसार दुर्घ’टनामा क्षतिविक्षत अनुहार चिन्नसक्ने अवस्थाको नभएकाले श’व सुभाषकै भएको मानेर अन्त्येष्टि गरिएको हो ।
को’मामा उपचाररत घाइतेको तीन महिनापछि होस फर्कियो । साउदीमै रहेका आफन्तले उपचार ठीक भएका व्यक्ति सुभाष भएको पाए । यता नेपालमा परिवारले बुझेर अन्त्येष्टि एवं काजकिरिया गरिएको श’व भने तेजेन्द्रको रहेको खुल्यो । पछि तेजेन्द्रकी आमा सावित्रा आएर छोराको संस्कारका लागि अन्त्येष्टि गरिएको स्थानको माटो लगेर गइन् ।
‘श’व ल्याएर दाहसंस्कार गर्दै काजकिरिया पनि गरिसकिएकाले जीवितै रहेका व्यक्ति सुभाष भन्ने पत्याउन मुस्किल पर्‍यो,’ सन्तोषी भन्छिन्, ‘पछि भिडियो कलमा कुरा हुँदा विश्वास लाग्यो ।’
उपचार पूर्णरूपमा ठीक भएसँगै एक वर्षपछि सुभाषलाई कम्पनीले नेपाल पठाइदियो । उनी जन्मस्थल भोजपुरको कुदाककाउले पुगे । मृ’त्यु भएको भनेर किरिया गरिसकिएका छोरा आउँदा बा–आमाका गला अवरुद्ध बने । ‘आमाले पुनः बच्चा जन्मिएको अभिनय गर्दै रीत पूरा गरेपछि मरिसकेको भनेर अन्त्येष्टि र काजकिरिया भइसकेको मेरो दोस्रो पटक न्वारन गरियो,’ सुभाष भन्छन्, ‘त्यसपछि पत्नीलाई बोलाएर सिन्दूर–पोते लगाइदिएर बिहेको प्रक्रिया पनि पूरा गरें ।’
भोजपुरबाट २०६० जेठ २९ गते ४८४१–११–२५५४ नम्बरको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि परिवारलाई लक्ष्मीमार्गमा ल्याएर उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी गएका थिए । उतै मृ’त्यु भएको झुठो खबर आएपछि सुभाषको मृ’त्यु दर्ता २०७२ साउन ६ गते कुदाककाउले मै गरिएको थियो ।
नेपाल फर्किएपछि जीवितै रहेको प्रमाणसहित चार वर्षदेखि सशरीर सरकारी अड्डा धाइरहँदा पनि उनको मृ’त्यु दर्ता खारेज हुन सकेको थिएन । त्यसका लागि वडा कार्यालय, नगरपालिका, प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि काम नभएपछि उनी गृह मन्त्रालयसम्म पुगे ।
‘म जिउँदै हुँदा पनि गल्तीले भएको मृ’त्यु दर्ता खारेजका लागि ठूलो झन्झट बेहोर्नु पर्‍यो । मृतक अभिलेखबाट नाम नहट्दा मैले नागरिकताको प्रतिलिपी पनि पाउन सकेको थिइँन,’ सुभाष भन्छन्, ‘म जीवितै छु । तर सरकारी विवरणमा मृ’त्यु भइसकेको देखिन्थ्यो ।’
बिहीबार नागरिकताको प्रतिलिपी लिँदै गर्दा उनका गला अवरुद्ध भए । प्रतिलिपी लिएपछि उनले भने, ‘म जीवितै भएको प्रमाण बल्ल पाएँ । नेपालमा केही काम पाइँदैन । दुई छोराछोरी र श्रीमती मसँगै आश्रित छन् । अब फेरि मिल्यो भने विदेश नै जाने सोचमा छु ।’
लामो समयदेखि अनआवश्यक दुःख दिएका कारण सरकारले आफूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘म जीवितै हुँदा मेरो मृ’त्यु दर्ता भयो । तर सच्याउन पटकपटक धाउँदा पनि धेरै दुःख पाएँ,’ सुभाष भन्छन्, ‘यो बीचमा मृतक भनेर अभिलेखमा जनिएकाले मैले केही गर्न पाइँन । त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार यसअघि नै भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका र मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले जीवितै रहेको प्रमाण दिए पनि सरकारी निकायले मृ’त्यु दर्ता खारेजीमा समय लगाइदिएको हो ।
Previous articleमलेसियामा भा’गेर काम गरेका बिष्टको मृ’त्यु पछी श’ब ल्याउन कठिनाइ !! उतै अत्ये’ष्ठि गरियो !! हार्दिक श्रन्दांजलि
Next articleभर्खरै बाहिरियो एमसिसिबारे गो,प्य भिडियो, MCC सम्झौता यसरि भएको रहेछ, (भिडियो हेर्नुहोस) जानकारीका लागि सेयर गराै